Topnepalnews.com | बिमलले पोखे दर्दनाक पिडा 'अब मैले देशको लागि लडेर के काम ?...
Posted on: June 01, 2016 | views: 1559
बहिनी मनिषाको शंकास्पद मृत्युभएपछि चिन्तीत बनेको नेपाली फुटबलर विमल घर्ती मगरले सामाजिक सञ्जालमा दुख पोखेका छन् । धेरै मायाले हुर्काएकी एक मात्रै बहिनी मनिषाको मृत्युुले विक्षिप्त बनेका विमलले भनेका छन् । सानैमा बाबा गुमाए उहाँ पनि देशकै लागि लड्नु हुन्थ्यो । बहिनीको हत्यारालाई कारबाहि नभए अब आफूले देशका लागि केहि गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
बुवा गुमाउको घाउँ निको हुँदै गर्दा बहिनी गुमाउँनु पर्दा बैनीको सम्झनामा अहिले बिमल रोएर दिन बिताउँदै छन् । देशका लागि लड्ने आफ्ना पिता गुमाएपछि बिमल आफै देशका लागि खेल मैदानमा आए । मैदानमा लडेर थुप्रै पटक नेपालीलाई खुुशी दिए । तर, आज उनले आफूलाई एक्लो भएको महसुस गरेका छन् र साथ मागेका छन् सबै सँग उनले भनेका छन् ।
यस्तो उनले पोष्ट गरेको स्टाटस
सानो छदा बाबु गुमाए बाबु पनि देशको लागि लड्नु हुन्थ्यो । बिस्तारै त्यो पिडा भुल्दै जाँदा १० बर्ष भको थियो आज अर्को पिडा थपियो मेरो फ्यामिलिमा बाबु नि देशको लागी कति गर्नु भो अनि मैले पनि। देशको लागि कति गरे तर हाम्रो घरमा यस्तो हुँदा सरकारले केहि गरेन, के काम एउटा आज देशको लागि गर्ने मान्छेलाई सुरक्षा छैन भने अरु आम नेपाली जनता कसरि बढ्नु ? यो नेपालमा मेरो बहिनीको हत्या गर्ने मान्छेलाइ कारबाही भएन भने यो देशको लागि के गर्नु ? आज म रोइ रहेको छु भोलि अरु कोइ रोइ रहेको होला मलाइ सब को साथ चाहियको छ । अब देशको लागि लडे अब बहिनीको लागि लड्छु ।